GrainPro ၏ ဆန်းသစ်သော ဖြေရှင်းနည်းများကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းစနစ်များ ဖန်တီးပါ။ - Pioneer Agrobiz
GrainPro Hermetic Stroage technology လေလုံပိတ်နည်းပညာသည် Coccon အတွင်းရှိ မျိုးစေ့များ၊ ဆန်၊ သီးနှံ့များ နှင့် အခြားခြောက်သွေ့သော ကုန်ပစ္စည်းများအား အစိုဓါတ်နှင့် ထိတွေ့မှုမရှိအောင် ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
GrainPro Cocoon သည် ရုတ်တရက် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများနှင့် ရေကြီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အတွင်း၌ ထည့်သွင်းထားသော သီးနှံ့များ၊ မျိုးစေ့များ၊ ကုန်ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
The GrainPro Cocoon isaproven solution that safeguards commodities even during sudden rains or floods. This is due to protective hermetic barriers that prevent moisture from coming into contact with grains, rice, and other dry agricultural products. Create better post-harvest systems using GrainPro’s innovative solutions.